Ao an-drenivohitry ny faritra Espaniola ao Catalonia - Barcelona, ​​dia mora ny miala amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray hafa, satria ny mponina ao an-toerana sy ny mpizaha tany dia afaka mampiasa fampitaovana isan-tanàna. Ao amin'ilay lahatsoratra dia hahafantatra ny tanànan'i Barcelona ianao, izay toa ilay piozila sarotra indrindra amin'ny olona izay tonga voalohany. Mba hivezivezena milamina manodidina ny tanàna, dia notarihina tamim-pilaminana ianao, mila mianatra ireo singa fototra ao amin'ny metro any Barcelone.
Fitambarana Metro any Barcelone
Ankehitriny, ny metro an'i Barcelona dia misy andalana 11 miaraka amin'ireo toby 165, anisan'izany ny any an-tany hafa, ary manana 123.5 km manontolo. Ny singa voalohany dia ny orinasan'ny orinasa samihafa: ny TMB dia manondro 1-5 sy 9-11, ary 6-8 - FGC (lalamby Katalonia). Ny andalana 9 sy 10, izay, raha ny marina, dia andalana iray amin'ny fifamoivoizana, dia navaozina indray ary ny fifandraisan-davitra dia mikasa ny hanorina andalana 12 sy 13 hafa.
Ao amin'ny sari-tany, dia marihitra ny laharana metro sy ny loko, ary ankoatra ny tsipika momba ny rafi-pandrama sy ny tramana 2.
Fiarandalamby metro any Barcelona
Ny endri-javatra faharoa amin'ny metro metro any Barcelone dia ny fahafahana any amin'ny toeram-piantsonana tsirairay fa tsy olona roa mahazatra - sehatra telo: eo afovoany - nosy lehibe iray, ary eo amin'ny sisiny - roa mahazatra. Ity endrika ity dia antsoina hoe "vahaolana Barcelona". Navelany hampihena ny fiakaran'ny mpandeha noho ny fahafahanao miditra sy miala amin'ny fiara roa miaraka amin'ny roa tonta.
Ny tsy firaharahiana ny ambanin'ny tany dia azo antsoina hoe lava, ety sy somary mihevi-tena ho amin'ny fifindrana eo anelanelan'ny toeram-piantsonana, satria ny mpandeha dia mandeha amin'ny lalana roa ary indraindray dia ilaina ny mamakivaky tsinjara roa.
Ohatrinona ny vidin'ny Metro Barcelona?
Ny làlan'ny metro rehetra any Barcelone dia anisan'ny faritra fifamoivoizana voalohany. Ny fividianana tapakila dia tena manara-penitra, misy milina fanodinana any amin'ny faritra fivahinianana izay hividianana tapakila. Ny tapakila indray mandeha aorian'ny komposting dia manan-kery mandritra ny adiny iray sy 15 minitra, ny vidin'ny 1 Janoary 2014 dia avy amin'ny 2.15 euros.
Ny vahaolana ara-toekarena kokoa dia ny fividianana tapakila T10 mandritra ny fitsangatsanganana 10, ny vidin'ny faritra 1 dia 10.30 euro, ary koa ny tapakila T50 / 30, T70 / 30, T-Mes, misy karazany 9. Ireo tapakila ireo dia tokony halaina tsara, satria raha tsaroanao, tsy voatanisa amin'ny milina izy ireo, ary mila mifanakalozana amin'ny mpiasan'ny metro izy ireo, vita maimaim-poana.
Ho an'ny mpitsidika ao an-tanàna dia misy sarintany manokana momba ny fizahantany "Card Barcelona" no avoaka, izay ahafahana mamonjy tsara, ary koa ankoatra ny mahazo tombony toy izao:
sarintany malalaka ao Barcelona sy metro;
Fitsidihana maimaim-poana amin'ny tranombakoka 16 sy ny toerana malaza ao an-tanàna;
fihenam-bidy ho an'ny mozika 26;
fitaterana tsy voafetra ao an-tanàna;
30% fihenam-bidy ho an'ny tanàna sasany;
fihenam-bidy rehefa mitsidika kafe sy trano fisakafoanana sasany;
20% fihenam-bidy amin'ny Aerobus.
Ny saran'ny karatra toy izany dia miankina amin'ny fotoana laniny any Barcelona (2, 3, 4 na 5 andro). Azonao atao ny mividy izany ao afovoan-tanàna ao amin'ny foibe orinasa mpizaha tany na mandoa vola amin'ny Internet.
Ahoana ny fampiasana metro any Barcelone?
Ao amin'ny Metro Barcelone dia misy karazana fivarotana hafa:
Ny fomba mahazatra dia ny hanangona ny tapakila eo ankavia ao amin'ny milina, ary miankavanana miankavanana;
Amin'ny varavarankely fitaratra - mila manao ny mifanohitra amin'izany ianao: atsangano ny tapakila havanana ary miankavia. Izy ireo dia apetraka ao amin'ny kianja Catalunya sy Barcelone Sant.
Any amin'ny toeram-piantsonana tsirairay dia misy sarintany metro ankapobeny, ary ny toeram-piaramanidina akaiky sy fiara fitaterana akaiky izay ahafahanao miova ihany koa dia aseho. Ny toeram-piantsonana dia manana fitaovam-pitaovana, ary toeram-pivarotana 119 - fiakarana ho an'ny kilemaina.
Metro fotoana any Barcelona
Ny endriky ny ampahatelon'ny metro any Barcelona dia ny fotoam-pamokarana:
Hatramin'ny 5:00 hatramin'ny 24:00 - Alatsinainy hatramin'ny Alakamisy, Alahady sy fialan-tsasatra;
Hatramin'ny 5:00 hatramin'ny 2:00 amin'ny zoma sy amin'ny andro fialantsasatra;
nanomboka tamin'ny 5:00 hatramin'ny 23:00 tamin'ny 24 Desambra;
amin'ny 5:00 hariva - ny sabotsy, 31 Desambra, 23 Jona, 14 Aogositra ary 23 Septambra.
Ho an'ny hetsika maimaim-poana ao amin'ny Metro Barcelone, tsy maintsy mividy sarintany amin'ny metisy amin'ny teny Rosiana ianao. Raha manana sarintany sy lisitr'ireo zava-tsarobidy ianao, dia afaka mivezivezy haingana sy mora kokoa manodidina an'i Barcelona, ​​ary raha mampiasa ny karatra Barcelone ianao, dia tena mahasoa ihany koa.
Eto koa ianao dia afaka mahafantatra momba metro any amin'ny tanàna Eoropeana hafa, ohatra, Prague na Berlin .
Fialantsasatra any Tonizia miaraka amin'ny ankizy
Krasnaya Polyana - toeram-pitsangatsanganana
Ny hotely tsara indrindra any Budapest
Baraingo gazy ho an'ny hazakazaka
Reichstag any Berlin
Ny fahitana an'i Tartu
Bibilava amoron-dranomasina amin'ny fitondrana vohoka
Aquapark any Marino
Milgamma - analogues amin'ny ampoules
The Museum of Sea Thalassa
Fanolorana aorian'ny firaisana
Ahoana ny fomba fitaterana zaza vao teraka ao anaty fiara?
Adele sy ny fianakaviany dia nanana andro mahafinaritra tao amin'ny toeram-pitsangatsanganana
Miteraka kohaka ny ankizy - inona no tokony hatao?
Satzeli amin'ny ririnina
Mark Zuckerberg dia nijaly noho ny fanafihan'ny hackers
Ny filma tsara indrindra momba ny ankizy amin'ny fotoana rehetra
Ny fitondran'ny vehivavy bevohoka tsy mivoatra eo amin'ny dingana voalohany
Kilalao ho an'ny ankizilahy 2 taona
Vitamina ho an'ny fo sy ny fantson-dra
Toeram-pandehanana fantsom-panofanana fanaka
Inona no fahasamihafana misy eo amin'ny studio sy trano?
Fikarakarana ny "Medovika" - ny fomba tsara indrindra sy ny fomba amam-panao taloha
Dani Alves sy Joanna Sanz malalany dia nanao fampakaram-bady tao Ibiza
Sakafo feno varimbazaha
Ny Nephroptose amin'ny 1 degre